दसैं मनाउन अमेरिका उ,ड्न लागेकी अनिताले मन रु ‘वाउने नोटबुक लेखेर संसारबाट बि,दा भएकी थिइन्! – Online Khabar 24
दसैं मनाउन अमेरिका उ,ड्न लागेकी अनिताले मन रु ‘वाउने नोटबुक लेखेर संसारबाट बि,दा भएकी थिइन्!
असोज 23 गते शनिवारकै दिन ९ बजे अनिताको अमेरिका जाने फलाईट थियो ।
श्रीमान अमेरिका भएका कारण उनकै साथ बस्नकालागि अनिताले अमेरिका जाने भिसा लगाएकी थिईन् । उता अमेरिकामा श्रीमान सुमनले श्रीमतीलाई स्वागत गर्नका लागि तयारी सुरू गरिरहेका थिए र यता पनि अनितालाई बि,दाईको उस्तै तयारी चलिरहेको थियो ।
घरमा बिदाईको लागि साईतको टिका मुछिएको थियो। माईती घर पसेर अनिता बुवा सगँ मनकामना मन्दिर दर्शन गरेर अमेरिका जाने तालिका मिलाईएको थियो। छोरीको प्रतिक्षामा माईतीहरू बसिरहेका थिए तयारी अन्तिम हुदै थियो ।
त्यतिकैमा छोरीको घरबाट एउटा फोन आयो जसकोकारण माईतीमा रू,वाबासी चल्न थाल्यो। माईती पक्ष आ,त्तालिदै छोरीको घर पुग्दा छोरी अनिता आफ्नै कोठा भित्र झु’ण्डिरहेकी हुन्छिन।
घ,टना यहि असोज २० गते बुधवार दिउसो झण्डै २ बजे तिरको हो । अनिताको नोट लेख्ने बानि रहेछ जुन नोट हामिले फेला पारेकाछौँ जसमा उनले घरमा भोगेका कुराहरू सबै लेखेकीछन् ।
समग्रमा उनले लेखेको कुराहरूबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि घर परिवारबाट उनले माया पाउन सकेकिछैनन्। श्रीमानले माया गरेपनि सासु र देवरले उनलाई ट,चर दिने, दा,ईजो देखि लिएर पैसा र सुनका बिषयमा सासुले या,तना दिने जस्ता कुराहरू उनले नोटमा लेखेकिछन्।
अनिता रेग्मीको २ वर्ष ८ महिना अघि सुमन खनालसगँ माघि बिवाह भएको थियो , बिहे भएको १ महिना पछि सुमन अमेरिका गएका थिए। बिचमा सुमन एक पटक नेपाल आएर पुन अमेरिका गएका थिए।
यति बेला भने अनिता पनि अमेरिका जाने फिक्स भएको थियो जुन कुराले अनिता र सुमन धेरै खुशी थिए । अमेरिकामा नेपाली गरगहनाको महत्व हुने भन्दै अनिताले आफ्ना गरगहना उतै लैजान्छु भन्दा बि,वाद भएको र यो घ’टना सोहि बि,वादकै कारण हुनसक्ने माईतीकाे ठहर छ ।
तर घ’टना जसरी घ,टेपनि र,हस्यमय नै देखिन्छ भनि माइतीले भनेका छन्। यो खबर सामाजिक स्ञ्जालबाट साभार गरियको हो ।
Prevदसैँकै बिच खुल्यो लाइसेन्सको फारम, कहिले होला परीक्षा ?
nextछोरी जन्माउने आशामा १३ छोरा बनाइसकेका दम्पती, अझै भन्छ्न: छोरी नजन्मे सम्म हामी रोकिदैनौ